Maraykanka oo wax ka bedelaya qulqulka biyaha tubbooyinka si loo ”DHAQO” timaha Donald Trump!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo wax ka bedelaya qulqulka biyaha tubbooyinka si loo ”DHAQO” timaha...
Maraykanka oo wax ka bedelaya qulqulka biyaha tubbooyinka si loo ”DHAQO” timaha Donald Trump!!
(Washington, DC) 14 Agoosto 2020 – Trump oo kacabanaya dhib ka haysta qubayska, doonayana. In sharciga xadidaya biyaha in wax laga badalo
Dowladda Mareykanka ayaa soo jeedisay isbedel lagu sameeyo macnaha qubeyska iyo madax-dhaqashada si loo kordhiyo biyaha tubada ka soo baxaya. Arrintaas waxay ka dhalatay cabashooyiin ka yimid Madaxweyne Trump oo la xiriira timihiisa sida ay maalinkasta yihiin.
Sida uu dhigayo sharcigii 1992-dii, qofka qubeysanaya ee Mareykanka looma ogola in tubada biyaha ay ka soo baxaan wax ka badan cabirka illaa 2.5 gallon, daqiiqaddiiba. Haddii ay heerkaas gaaraan, way ka istaagayaan biyaha.
Maamulka Trump wuxuu doonayaa in xaddigaas uu noqdo mid quseeya cabirka afka tuubada, halkii laga dhigi lahaa wadarta guud ee biyaha.
Dadka u ololeeya in biyaha la yareeyo waxay ku doodayaa in arrintaas ay noqoneyso beerdareynta iyo iyo ku ciyaaridda biyaha iyo arrin aan loo baahnayn in ay tahay.
Isbedelka cusub waxaa Arbacadii soo jeedisay Laanta Tamarta, kaddib cabasho ka soo gaartay Madaxweyne Trump, bishii la soo dhaafay.
“Haddaba qubeyska – waxaad damceysaa in aad qubeysato, biyahana ma soo baxayaan. Haddii aad rabto in aad gacmaha dhaqato, tubadu biyo ma lahan. Haddaba maxaad sameyneysaa? Waa in aad meesha iska taagnaato ama aad ku daahdo qubeyska? Sababtoo ah, timaheyga – kuwaaga ma ogi – waa in ay si fiican u dhaqmaan. Si wanaagsan,” ayuu yiri.
Waxaa Diyaariyey: Bile Gurxan
Previous articleGOOGOOSKA: Leipzig vs Atletico Madrid 2-1 (Leipzig oo nus-dhamaadka gaartey)
Next articleWar kasoo kordhay dhacdo ugub ah oo laga soo sheegay shirkii Golaha Wasiirrada